Esory ireo hira an-jatony ao iTunes, iPhone & iPod
Ahoana no hanaisotra ireo hira feno diplaoma amin'ny iTunes, iPhone sy iPod?
Rehefa manana tranokala iTunes lehibe ianao, dia mety ho mora ny hampiato azy amin'ny dika mitovy dika mitovy amin'io hira io. Mety ho sarotra koa ny hitady ireo duplicates. Tena marina izany raha manana dikan-teny samihafa amin'ny hira iray (milaza ny iray amin'ny CD , iray hafa avy amin'ny fampisehoana mivantana). Soa ihany, iTunes dia manana singa natsangana ahafahana mamantatra mora foana ny duplicates.
Ahoana ny fomba fijery & amp; Esory iTunes Duplicates
Ny endriky View Duplicates amin'ny iTunes dia mampiseho ny hiranao rehetra izay manana ny anarana sy ny anaran'ny hira. Ity ny fomba fampiasana azy:
Tsindrio ny menu-n'i View (ao amin'ny Windows, mila mametaka ny bokotra Control sy B ianao mba hanamboarana ny menu aloha)
Tsindrio Show Show Duplicate Items
iTunes dia maneho ny lisitry ny hira izay heveriny fa duplicates. Ny fomba fijery tsotra dia ny rehetra. Azonao atao koa ny mijery ny lisitra miaraka amin'ny rakikira amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra Same Album eo ambanin'ny varavarankely playback eo an-tampony
Azonao atao ny mamandrika ireo hira avy amin'ny tsindry amin'ny topy ny tsanganana tsirairay (Anarana, Artist, Date Added, sns.)
Rehefa mahita hira izay tianao hamafa ianao, ampiasao ny teknikanao tianao hamafana hira avy amin'ny iTunes
Rehefa vita ny dia, kitiho ny Done ao amin'ny zoro havanana havia hiverina amin'ny fomba fijery mahazatra amin'ny iTunes.
Raha esorina ny rakitra duplicate izay ampahany amin'ny playlist , dia nesorina tao amin'ny playlist izy ary tsy nosoloin'ny ordinatera. Mila ampidirinao ao amin'ny lisitry ny horonan-tsary ny horonam-peo.
View & amp; Esory ny dika mitovy
Asehoy ny duplicate mety mahasoa, fa tsy marina foana. Mifanaraka fotsiny amin'ny hira mifototra amin'ny anarany sy ny mpanakanto. Midika izany fa afaka mampiseho hira mitovy izy ireo fa tsy mitovy. Raha mpanakanto iray no mitantara ny hirany amin'ny fotoana samihafa amin'ny asany, Display Display Duplicates dia mihevitra fa mitovy avokoa ny hira na dia tsy izy aza ary mety ho tianao ny hitazona ireo dikan-teny roa ireo.
Amin'ity tranga ity dia mila fomba tsara kokoa hijerena duplicates ianao. Ilainao ny fanehoana Show Exact Duplicate Items. Mampiseho ny lisitry ny hira izay manana ny hira, mpanakanto ary album. Satria toa tsy dia misy tononkira iray hafa ao amin'io rakikira io ihany, fa ianao dia mahatsapa fahatokisan-tena fa ireo duplicates marina ireo. Ity ny fomba fampiasana azy:
Open iTunes (raha toa ianao ka eo amin'ny Windows, tsindrio ny bokotra Control sy B aloha)
Hazòny ny fanalahidin'ny safidy (Mac) na ny fikandrana Shift (Windows)
Tsindrio ny menu
Tsindrio Objects Exact Duplicate Items
Ny iTunes dia tsy miseho afa-tsy duplicates marina. Azonao atao ny mamaritra ny valiny amin'ny fomba mitovy amin'ny fizarana farany
Esory ny hira araka izay tianao
Tsindrio ny atao mba hiverina amin'ny fomba fijery iTunes.
Raha toa ianao tsy tokony hamoaka Exact Duplicates
Indraindray ireo hira izay mampiseho Show Exact Duplicate Items dia tsy tena marina. Na dia mety manana anarana sy artista ary album ihany aza izy ireo, dia karazana antontan-karazan-javatra na voavonjy amin'ny sehatra samihafa.
Ohatra, hira roa dia mety amin'ny endrika samihafa (miteny, AAC ary FLAC ), raha tianao ny iray ho an'ny toeranao avoakany tsara ary ny iray hafa noho ny habeny kely hampiasaina amin'ny iPod na iPhone. Hamarino ny fahasamihafana misy eo amin'ny rakitra amin'ny alalan'ny fampahalalana bebe kokoa momba azy ireo . Amin'izany dia azonao atao ny manapa-kevitra raha tianao ny hitazona na hanesorana ny iray.
Inona no atao raha manafaka ny rakitra tianao ianao?
Ny loza ateraky ny fijerena rakitra duplicate dia mety hamafa ny hira tianao ho hitanao. Raha vitanao izany dia manana safidy vitsivitsy ianao mba hahazoana io hira io:
Raha nividy izany tamin'ny iTunes ianao, dia alefaso izany
Raha azonao avy amin'ny Apple Music, ampio izany indray
Raha misoratra amin'ny iTunes Match ianao, raki-peo
Raha ao amin'ny iPhone na iPod dia ampiasao izany
Raha manana backup ny iTunes library ianao, dia avereno averina .
Ahoana no hanafoana duplicates amin'ny iPhone sy iPod?
Satria ny loha-tahiry dia manan-danja kokoa amin'ny iPhone sy ny iPod fa tsy amin'ny solosaina, tokony ho azonao antoka fa tsy manana dika mitovy ny hira ao. Tsy misy singa natsangana ao amin'ny iPhone na iPod izay mamela anao hamafa hira duplicate. Ampifanarahanao kosa ny duplicates ao amin'ny iTunes ary tsindrio ny fanovana ao amin'ny fitaovana:
Araho ny torolàlana momba ny fitadiavana duplicates avy amin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity
Fidio izay tianao hatao: na esory ny hira avo roa heny na ny hira ao amin'ny iTunes, fa esory amin'ny fitaovana
Rehefa vita ny fanovana ao amin'ny iTunes, afeno ny iPhone na iPod ary ny fiovana dia hiseho eo amin'ny fitaovana.
Ahoana no Hihira Hira amin'ny iPhone
Ahoana ny fomba hanovana ny tenimiafinao manokana amin'ny findainao manokana
Ny fomba hijerena ny fiainana an-tsokosoko ny fiainana an-tsokosoko
Ahoana ny fialana video iPod
Ahoana ny fampiasana mozika Apple amin'ny iPhone
Ahoana ny famerenana ny iPhone amin'ny backup
Ahoana ny fomba ampiasana Opera Mini ho an'ny iPad, iPhone sy iPod Touch
Mampiasa ny iPhone Music App
Inona no tokony ho fantatra mba hampidirana iPhone amin'ny iPad?
Epson Video Projectors amin'ny 4K Fanamafisana, HDR, ary More
Ahoana ny fampiasana ny Kindle ho an'ny e-mail maimaim-poana amin'ny mandeha
Carbonite: Fivoriana iray feno
Nahoana ianao no mila PDA?
Inona no dikan'ny hoe boot?
Mitory ve ny mpikaroka?
Fametrahana trano BAT & Lotsa ao amin'ny "SimCity 4"
Ahoana no hanaisotra tar.gz Files amin'ny Linux
Inona no atao hoe PTX?
Fomba fampifandraisana iPad amin'ny Internet Port Ethernet
Ahoana ny fandefasana imailaka amin'ny finday ho an'ireo tsy nahazo alalana
Beach Books: Iza no E-Reader?
Nanazava ny solosaina finday
Mandeha androany miaraka amin'ny iPhone
Ny zavatra voalohany 10 tokony hataonao amin'ny iPad
Ahoana no Hanovana Column amin'ny mailaka ho an'ny Windows
Torohevitra fikarohana avy amin'ny mpandinika iray ao amin'ny Google